चुरा भाँचिन्छ कि फोरीन्छ?,(विनोद रोका)
मायाको लेखाजोखा हुदैन। यद्यपि म जन्मेर हुर्केको खोटाड० जिल्लाको सेरोफेरोका लोग्ने र स्वास्नी, प्रेमी र प्रेमिका भनौ एकले अर्कालाई कति माया गर्छन भनेर जाँच्नुपर्दा चुरालाई प्राय आफैले लाईरहेको कपडामा बेरेर भाँच्ने गर्दछन। अनि भाँच्दा जति बढी चुराको टुक्रा विचको भागबाट निस्कन्छ त्यति नै एकले अर्कालाई माया गरेको भन्ने विश्वास गरिन्छ। यदि कुनै बस्तु लागेर वा हिर्काएर फुट्यो भने त्यस्लाई नकारात्मक रुपमा लिईन्थ्यो। जस्तो कि विधवाका हातमा रहेका चुराहरु फोरिन्छन भाँचिदैनन। यहि बोलीचालीको भाषालाई टिपेर मैले एउटा यस्तो गीत लेखेको थिएँ न्युर्योकमा श्रावण १४, २००६ साल तिर।
कति भाँची हेरौ चुरा माया कति छ भनि।
याद आउछ सधै भरी माया हामीले ला'को।
जुगजुगसम्म नछुटने कसम हामीले खा'को।।
तिमि विना छ शुन्य शुन्य सार छैन यो जीवनको।
आशा लिई बाँचेकी छु न्यानो न्यानो मिलनको।।
यो गीत न्युर्योक आएको समयमा शभ्मुजीत दाईको हातमा परेपछि मेनुकाको प्रस्तुती, शभ्मुजीतको संगीत र अन्जु पन्तको स्वरमा सजिएर २००७ सालमा निस्कीएको मेरो एकल रचनाको सिडी 'मेरी प्रिय'मा समावेश हुन पुग्यो अरु गीतहरु झैं। साच्चै भन्ने हो भने शभ्मुजीत दाईले मलाई पहिले यहि गीतमा संगीत भरेर सुनाऊनु भएको थियो र सुनेपछि मेरो गीतले पुर्णता पायो भन्ने अनुभुती मलाई भयो। अर्थात गीत ज्यादै राम्रो लाग्यो मलाई। अनि मैले दाईलाई मेरो त्यो सिडिमा रहेका सबै गीतहरुको जिम्मा लगाएको थिए ।
यो सिडीको विमोचन शम्भुजितदाई न्युर्योकमा गर्नु पर्छ भन्नुहुन्थ्यो। त्यही बेला भेट भएका गीतकार नवराज लम्साल भाईलाईपनि आफुले निकाल्ने सिडि कहाँ विमोचन गरौ भनि सल्लाह माग्दा मलाई भन्नु भो 'दाई तपाई झण्डै १० बर्ष पछि नेपाल जादै हुनुहुन्छ त्यसैले यो सिडि त नेपालमै विमोचन गर्नुहोस। यो त परदेशबाट लगेको कोशेली जस्तै मुल्यवान हुन्छ नेपालमा बस्नेहरुका लागी। उता विमोचनको सम्पुर्ण व्यवस्था मिलाऊन म सघाउंला' भनेपछि मैले उन्को सल्लाह बमोजिम नेपाल मै गएर सिडिको विमोचन गर्ने निधो गरें ।
विमोचनको समयमा नवराजजी नेपाल बाहिर हुने खवर आएपछि एमसीकालागी नरेश भटृराईजी भेटिनु भो। त्यस्तै मित्र दुबसुजीले विमोचनका लागी चाहिने सभापति, समालोचक र अन्य कुराकालागी आफुले जिम्मा लिईदिने वचन दिनु भएको थियो। तर गएपछि वहाँको व्यस्तताले गर्दा सो जिम्मा शम्भुजीतदाईलाई नै लगाएं । विमोचनकालागी भने राष्ट्र्कवि माधब घिमिरेज्युलाई अनुरोध गरिसकेको थिए न्युर्योकमा रहनु भएकी उहाको छोरी ज्योती पौडयाल मार्फत।
मल्ल होटलमा राखिएको विमोचनको कार्यक्रममा जाने तरखर गर्दा दुबसुजीले फोन गर्नु भयो 'म समयमै रत्न शम्सेर थापा र डा. कृष्णहरि बरालका साथ होटलमा पुग्दैछु, उहाहरुले कार्यक्रमको सभापति र समिक्षकको काम गर्नुहुन्छ। कार्यक्रमस्थलमा पुगेपछि शम्भुजीतदाईले पनि विमोचनकालागी चाहिने अर्को सेट अतिथीहरु तयार पार्नु भएको थाहा भयो जस्मा माणिकरत्न सभापति र समिक्षकमा भुपेन्द्र खडका। यसरी मेरो सौभाग्य नै भनौ संगीत क्षेत्रका दुईसेट महारथीहरु र राष्ट्र्कविज्यु विमोचन कार्यक्रमका सहभागी हुनु भयो। सहभागीहरुको हकमा साहित्य, संगीत, कला, पत्रकारिता, कानुनविद्, र बुद्धिजीविहरुको गरिमामय उपस्थिती थियो भने सिडीमा रहेका गीतहरुका गायक, गायिकाहरु रामकृष्ण ढकाल, दिपक लिम्वु, अन्जु पन्त, मनोजराज, र म्यूजिक भिडियोमा अभिनय गर्ने तितो सत्यमा हाथी र गैडाको उपनामले चिनिएका कलाकारहरु निर्मल शर्मा र मिना डंगोलकोपनि उपस्थित भै दिनाले शभ्मुजीतदाई प्रतिको आदरलाई दर्शाई रहेको थियो । शायद काठमाण्डौमा भएका थोरै नै कार्यक्रममा यस्ता व्यक्तित्वहरुको बाक्लो उपस्थिती हुने गर्दछ जस्लाई राष्ट्र्कविज्यु र अन्य वक्ताहरुले आफनो भाषणको क्रममा व्यक्त पनि गर्नु भयो। यो उपस्तिथीले मप्रतिको प्रेम र सदभाव अझै मेरा कानुन व्यवसायी मित्रहरु, पत्रकार साथीहरु, र शुभेक्षुकहरुमा मरिसकेको छैन भन्ने अनुभूती गराउदथ्यो।
गीतहरुको समीक्षा गर्ने क्रममा कृष्णहरि बरालज्यूले कति भाँचि हेरौ चुरा माया कत्ति छ भनि, बर्षौ वित्यो विछोडमा रात काटे तारा गनीको ठाउंमा कति फोरी हेरौ चुरा हुनुपर्ने हो भाषागत दृष्टिले | तर प्रवासमा रहदा लेखिएको हुँदा यसो हुन गएको होला भन्नु भयो। उहाले बोल्दाबोल्दै मन्चमा रहेका शम्भुजितदाईले प्रतिवाद गर्दै भन्न थाल्नु भो 'बरालजीको भनाई गलत छ किनकि फुटने शव्दले भाग्य फुटेको जस्तो नराम्रो अर्थ दिन्छ। यहा चुरा भाँचेर प्रेमी र प्रेमिका एक अर्कालाई कति माया गर्छन भन्ने आशय रहेको र बोलिचालीमा पनि चुरालाई फोर्ने भन्दा भाँच्ने नै भन्ने गरिन्छ' भन्नु भयो। डायसमा रहनु भएको राष्ट्र्कवी, रत्नशम्शेर, माणिकरत्न, भुपेन्द्र र म समेतको त्यही धारणा रहयो। अनि दर्शकहरुले पनि तलबाट चुरा भाँचिन्छ कस्ले कति माया गर्छ भनेर फोरिदैन भन्ने भनाईमा समर्थन जनाऊनु भयो।
अन्जु पन्तले यस गीतलाई दर्शकहरुका अगाडी गाएर सुनाईन। सबैले गीतको खुब तारिफ गरे। त्यस्तै दिपक लिम्बुले एल्बमको शिर्ष गीत मेरी प्रिय मेरी प्रिय र मनोजराजे यस्तो लागथ्यो बाच्ने रहर डढेलोले खायो शीर्षकको गीतलाई गाऊदा पनि दर्शकहरुले मन पराए।
कति भाँची हेरौ चुरा नामको गीतसंग अरु केही रोचक प्रसंग पनि जोडिएका छन। म २०१० सालको असोजमा नेपाल गएको थिएं। त्यसबेला प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान उत्तर अमेरिकाको पुरष्कार वितरण कार्यक्रम बैरागी काईलाज्यु र मेरो आफनै गीत संग्रह 'जिवनको यात्रा'को विमोचन समारोह अम्वर गुरुड०ज्युबाट गराएपछि गोरखा एफएमका आरजे भाई राजन घिमिरेले कुराकानीकोलागी अनामनगरमा बोलाए। मसंग केही बेर प्रवासमा नेपाली साहित्यमा मेरो संलग्नता र कानुनी पेशामा रहदा अमेरीकामा रहेका नेपाली कलाकारहरुसंगको उठबसको प्रसंगका बारेमा प्रश्नहरु सोधे। अन्तमा मलाई दाईको कुनै गीत भए बजाऊनु हुन्थ्यो छ ? भनि सोधे। मैले सिडि त छैन भाई मसंग भनें फेरी उन्ले सोधे सिडिको नाम के हो? हामीसंग कुनै गीत छ कि खोज्छौ। मैले सिडिको नाम भनें तर उन्ले त्यो सिडीपनि छैन भने । कुनै गीतको बोल थाहा भए भन्नुहोस् न? मैले अन्जु पन्तले गाएको कति भाँची हेरौ चुराको गीत पनि छ 'मेरी प्रिय' सिडीमा भनेपछि उन्ले दाईले अघिनै अन्जु पन्तको गीत भनेको भए यत्रो खोज्नै पर्दैनथ्यो। यो गीत त श्रोताहरुको अत्यधिक रोजाईमा परेर पहिला भएकोले अन्जु पन्तलाई हामीले यहि स्टुडियोमा बोलाएर सम्मान गरेका थियौ भने र रेडियोबाट त्यो गीत बजाए। अनि त्यसबेला लाग्यो रचना र उत्पादनको लगानीकर्ता म भए ता पनि गीतले संगीत र गला पाएपछि त्यो गीत रचनाकारको भनेर श्रोताका बिचमा नचिनिने रहेछ। छोरा छोरीहरु जस्तै विबाह गरेपछि फलानाका छोराछोरी भन्दा पनि फलानाका श्रीमान वा श्रीमती भनेर उनीहरुको पहिचान हुन्छ। यद्यपि आमाबाबाको हृदयमा माया भने सधैभरी हुने।
अन्जु पन्त आफनो सांगीतिक कार्यक्रममा नमस्ते अमेरीकाको संगीत टोलीमा अमेरीका आउंदा खेरी न्युर्योक बसाईको क्रममा मनोज र ऊनी हाम्रै पाहुना भएका थिए। ऊन्ले अमेरीकामा भएका कतिपय कार्यक्रममा अरु गीतका साथै यो गीत पनि गाईन। र भनिन दाई यो गीत मैले तपाईको भनेर मात्रै गाएकी होईन। मैले गायका हिट गीतहरु मध्येमा यो पनि एउटा पर्दछ त्यसैले कहिले दर्शकको अनुरोधमा त कहिले मेरो आफनै ईच्छाले कति भाची हेरौ चुरा गीत म स्टेजहरुमा प्राय गाऊने गर्दछु भनिन्। नायक कृष्ण मल्लजीले पनि यो गीतको म्युजिक भिडियो बनाएमा डिभीडिले राम्रो बजार लिन सक्छ भन्नु भएको थियो। तर मैले वितरकको अनुरोधमा यसको प्रोमो मात्र बनाएं किनकि सित्तैमा डाऊनलोड गरेर सुन्ने बानी परेका नेपाली श्रोताहरुका विचमा यस्तो होला भन्ने मैले विश्वास गर्न सकिन।
त्यस्तै अहिले न्युर्योकमा स्थापित गायिकाको रुपमा चिनिएकी पविता परियार बहिनीले पनि अमेरीकामा आएपछि उन्ले स्टेजमा गाएको पहिलो गीत पनि कचि भाची हेरौ चुरा नै थियो। त्यसबेला शम्भुजीतदाई न्युर्योकमा हुनुहुन्थ्यो। ऊहालाई स्टेजमा कार्यक्रम गर्नकालागी एउटा महिला स्वरको आवश्यकता रहेको र पविता बहिनीपनि त्यसबेला भरखरै नेपालबाट आएकी हुँदा उन्ले एकल रुपमा यहि गीत र शम्भुजीतदाईसंग अर्को गीत खोटाड० बसेरी नामक दोहोरी गीत गाएकी थिईन। पविताले अझै पनि यदाकदा भन्ने गर्छिन मैले अमेरीकाको स्टेजमा गाएको पहिला गीत विनोद दाईको कति भाँची हेरौ चुरा हो।
आफु भाषा र गीतको विज्ञ नभएपनि मलाई गीतमा रहेको कति भाँची हेरौ चुरा माया कति छ भनि, बर्षौ वित्यो विछोडमा रात काटे तारा गनी नै ठिक लाग्छ। किनकि चलन चल्तीमा यसरी नै बोलिन्छ र बुझ्नेलेपनि कस्ले कस्लाई कति माया गर्छ भन्ने अर्थमा यो शव्दको प्रयोग यसरी नै हुनु पर्दछ भन्ने ठान्दछन जस्तो लाग्छ।